Exotics | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fomba fikarakarana fikarakarana, fomba fihinana voankazo hafakely
Ny mlarlar dia tsy zavamaniry tena malaza any amin'ny faritra misy antsika, fa ny sasany kosa tia kokoa ny tantsaha. Ny karazam-panafody mahazatra 2 - Alemana sy Japone. Mivoatra any amin'ny toerana misy toby mafana sy alim-baventy izy ireo, saingy noho ny hafanana hafanana dia tsy voatery hamboly azy eny an-kalamanjana.
Passionflower: fitsaboana feno, fanasitranana ary fangatahana fitsaboana
Passionflower dia zavamaniry tena mahavariana. Izy io dia an'ny fianakavian'ny Passion Flowers ary manana karazany enina enina. Mamboly voaloboka any Amerika Atsimo, Aostralia, Azia ary Mediterane ny voaloboka. Ny Passionflower dia tsy ny hany anaran'ilay zavamaniry, antsoina koa hoe passionflower, liana lamandy, mpihaza mpihaza, mpamosavy, granadilla, voninkazo ny fitiavan'ny Tompo.
Mampitombo ny rambony eo amin'ny varavarankely, trano maotina
Ny mlarlar dia tanimbary mainty. Miresaka amin'ny ranomandry. Misy karazana loquat 30 eo ho eo, saingy ao an-trano, dia misy tsiranoka sy voankazo tsara. Fantatrao ve? Nanomboka niasa tany Japana i Medlar. Ao an-tokatrano dia mety hahatratra 1,5-2 metatra ny haavony. Ny ravin'ny zavamaniry dia lenginina, hoditra, manjelanjelatra ambony, ambany - velvety.
Ahoana no hananana kumquat ao an-trano
Ho an'ny mpamboly maro, manana zavamaniry iray izay tsy mahafaly ny maso, fa mitondra voankazo ihany koa, dia hevitra fiarovana. Ny iray amin'ireo zavamaniry voankazo ireo, izay nahazo laza malaza vao haingana - kumquat, dia zavamaniry azo anaovana zana-trondro izay azo zaraina ao an-trano. Fantatrao ve? Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-draharaha
Ny mahasoa sy ny kumquat mahatsiravina, mandinika isika
Isan-taona dia misy voankazo maro be mipoitra any amin'ny toeram-pivarotana entana, ka ny kumquat (na ny loko volomparasy) dia efa nijanona ho zava-baovao. Tahaka ny voankazo voankazo rehetra, ny voankazo kumquat dia manana tombony be dia be, izay horesahina etsy ambany. Ny firafitry ny kumquat: setrin'ny vitamina sy mineraly. Amin'ny endriny, kumquat dia mitovy amin'ny fitomboan'ny menaka sy ny citrou.
Ny anana: inona no karazana sy karazana voankazo hafakely
Hatramin'ny nahaterahan'i Christopher Columbus, iray arivo taona lasa izay, ny Eoropeana voalohany dia manandrana anana an-dranomamy, dia nampanan-karena be ny palette ny loko mamaritra ity zava-maniry ity. Nipoitra izany, indrindra fa misy karazany 9 karazana anana ary karazany maro hafa. Ampitao izy ireo ho an'ny tetik'ady.
Ahoana no hananana papay avy amin'ny voa ao an-trano
Tsy mahagaga intsony ny zavamaniry any an-trano, nefa mbola mahafinaritra azy ireo foana ny endriny sy ny ahi-maitso marevaka. Papaya dia iray amin'ireo zavamaniry ireo, amin'ny endriny mitovy amin'ny hazo palmie misy ravina lava sy lava. Amin'ny natiora, ny haavony dia tonga 10 metatra, ao an-trano - hatramin'ny 6 metatra ambony.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Exotics